နှင်းဆီရင်ခွင်အငြိမ့် .. အမေရိကား လာကြမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » နှင်းဆီရင်ခွင်အငြိမ့် .. အမေရိကား လာကြမည်
နှင်းဆီရင်ခွင်အငြိမ့် .. အမေရိကား လာကြမည်
Posted by kai on Jun 4, 2011 in Events/Fundraise | 12 comments
အဲဒါပါပဲ..။ မြန်မာအငြိမ့်သဘင်ကို အမှတ်တရလေး ကြည့်ကြပါလို့..။ သတင်းတွေ ဒီမှာပဲဆက်တင်ပေးသွားမှာပါလို့..။
ဆိုတော့.. အယ်အေမှာလုပ်မယ့်.. အငြိမ့်ပွဲ.. ခေါင်းစဉ်စာသားလေး.. တပ်ပေးမလား စဉ်းစားနေပါတယ်..။
လွယ်လွယ်ပဲ.. အယ်လ်အေနှင်းဆီ လို့ ပေးလိုက်မယ်လေ..။
သူတို့ပြန်လာရင် .. တွက်ခြေကိုက်ရဲ့လားမေးရမယ် …..
ok ရင် ကျုပ်တို့လဲ အမေရိကားရောက်ဖူးအောင် MG ရွာသူရွာသားတွေစုပြီး အငြိမ့်ထောင်သင့်ရင်
လူရွှင်တော် .. ကိုအောင်ပု ကိုကြောင်ကြီး
မင်းသမီးများ … ဆူး မဝေ မနော … အများကြီးပါ (ခေါ်ပြီးတော့ ရုပ်ေ၇ရူပကာစစ်ရအုန်းမယ် )
ဇာတ်ဆရာ … ကိုပေါက် ( မန္တလေး )
ပြဇာတ်မင်းသား …. ဖက်တီး
လူကြမ်း … king
လူရွှင်တော်က (၄)ယောက်လေ ကျန်တဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ သူကျတော့ ပြဇာတ်မင်းသားတဲ့ ၊ခွေထွက်ရင် ၀ယ်ကြည့်မယ်နော်။ ကူးခွေပေါ့ ။
ရူပကာ စစ်ရင်တော့ ကျတော့မှာပဲ။
မစစ်ပဲ အောင်မဲ့ နည်းလေး မရှိဘူးလား..
ညနေမှ ဦးဖတ်တီး မိန်းမ နဲ့ သွားပြီး စကားပြောလိုက်မယ်လေ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဟိုနေ့က ပို့လိုက်တဲ့ ခြင်းလေး သဘောကျရဲ့လား မသိဘူးနော်။
ကဗျာဆန်ဆန်” နှင်းဆီရင်ခွင်အယ်လအေတွင်(တခွင်)” လို့နာမည်ပေးလိုက်ပေါ့။ သူကြီးပြဇတ်အဖွဲ့အတွက်လည်းကြိုပြီးနာမ်ာပေးလိုက်မယ်၊ သူကြီးနဲ့ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုတို့ ထိတ်စာလုံးတွေကိုယူပြီးလုတွေစိတ်ဝင်စားအောင် “ကြီးမိုက်” လို့ …….။
ကိုင်း လာလေရော့ ဘယ်မင်းသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘုရားတရားသာအာရုံပြု
ငါတဲ့လူကြမ်း ကြမ်းလွန်းလို့ တစ်ယောက်တည်းပဲ ပါတာကွ ….
၀ါးဟားဟား … ဟုတ်ပါဘူး ငှဲ ငှဲ ငှဲ
သမီးက မြန်မာအကတော့ မတတ်ဘူး … နိုင်ငံခြားအက ပဲကတတ်တယ် … နောက်ဆုံးပေါ်ပေါ့
နိုင်ငံခြားအက ပဲကတတ်တယ် ဆိုတဲ့မမလေးကို ချိုကုတ်ဒူးကြီးတို့ ဒင်နာပွဲကျလျှင် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတင်ပြီးငှားမယ်နော် ။
အမယ်လေး။ ပြဇာတ်မင်းသား လုပ်ချင်တဲ့ လူနဲ့ မင်းသမီးလုပ်ချင်တဲ့ လူနဲ့ အများကြီးပါလား။ အငြိမ့်တစ်ခုကို ဒီ MG က လူတွေ အကုန် ပါဝင်လို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြဇာတ်ဆိုလည်း လူအများကြီး သုံးတဲ့ ပြဇာတ်မှ ဖြစ်မှာနော်။ အင်း… ဒါဆိုရင် ဘယ်လို ပြဇာတ်မျိုးကို ကရင် ဒီ MG က လူတွေ အကုန်ပါနိုင်မလဲ။ ဟုတ်ပြီ…တရုတ်ကားတွေထဲကလို စစ်ဖြစ်တဲ့ ပြဇာတ်ကရင် ဒီMG က လူတွေ အကုန် ပါနိုင်လောက်တယ်။ ဒါကြောင့် အခုအချိန်ကစပြီ ကျွန်တော်ဆီမှာ လာပြီ ကိုယ် သရုပ်ဆောင်မယ့် အပိုင်းကို လာပြီ စာရင်းသွင်းပေးကြပါ။ နောက်ကျရင်တော့ မကောင်းတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်။ သတိ…ဦးရာလူ စနစ်..။
ဦးဖက် သမီးက ရွှေလက်ခုပ်လဲတီးတတ်တယ်နော် စိတ်ကူးမလွဲနဲ့အုန်း စင်ပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ တစ်ချိန်လုံး တီးနေလိုက်မယ်:P
ဦးဖက်မှာရှိတာ သမီးဟုတ်ပါဘူး၊ သားပါဗျ။ ရှိရင် မလျှိုထားနဲ့နော် ဦးဖက်ရေ။ သမီးဆိုတာ ရတနာတပါးဗျ၊ ကြွားသင့်တဲ့အခါ ထုတ်ကြွားရတယ်။ စကားမစပ် ကြောင်ကြီးကလူပျိုနော်